कतारबाट फर्केका डाक्टरको उपचार र क्‍वारेन्टाइन अनुभव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
चैत्र १४, २०७६ दिनेश रेग्मी
विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमको बेला डा. शाक्यले कान्तिपुर संवाददाता दिनेश रेग्मीसँग कतारदेखि नेपालसम्मका अनुभव यसरी सुनाए :
म नेपाल आउनुभन्दा दुई महिनाअघि नै हवाई टिकट लिएको थिएँ । मेडिकल सेन्टरमा सेड्युल मिलाएर हिँड्नुपर्छ । त्यही हुनाले टिकट पहिल्यै लिनुपर्छ । संयोग, कतारमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिनु र म घर आउने समय एउटै जस्तो पर्न गयो । त्यहाँ पहिलो पटक फेब्रुअरी २९ (फागुन १७ गते) मा एउटा केस देखिएको सरकारले घोषणा गर्‍यो । म नेपाल आउने दिन मार्च १७ (चैत्र ४ गते) सम्म कतारमा करिब ३ सय संक्रमित भेटिएका थिए । पहिलो केस भेटिएको एक महिना नपुग्दै शुक्रबारसम्म ५ सय ४९ केस पुगेको छ ।
कतारमा पहिलो केस देखिएपछि सरकारले सतर्कता बढाउँदै लग्यो । कतारले यो रोगविरुद्ध लड्न धेरै सावधानी अपनाएको छ । कसैलाई औषधि किन्न पर्‍यो भने पनि उनीहरुले अनलाइन अर्डर गर्छन् र फार्मेसीले घरमै पुर्‍याइदिएका छन् । प्राईभेट अस्पतालमा इमर्जेन्सीबाहेकमा बिरामी घटेका छन् । मैले आफू काम गर्ने मेडिकल सेन्टरमा पहिला दैनिक ३०–४० बिरामी जाँच्थें । पछि कम आउन थाले ।
मेडिकल सेन्टरमा जो उपचारको लागि आउँथे, उनीहरुको ढोकेमा ज्वरो नापिन्थ्यो । रुघाखोकी लागेको छ कि छैन भनेर हेरिन्थ्यो । रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामी अलि गम्भीर देखिएमा हामी सरकारी अस्पताल रिफर गर्थ्यौ । त्यो बाहेकका बिरामीलाई मेडिकल सेन्टरमा जाँच्थ्यौं । सतर्कताको लागि मास्क र पन्जा लगाएर बिरामीसँग पनि दूरी बनाएर जाँच्थ्यौं । बीपी, तापक्रम, स्टेथेस्कोप प्रयोग र ल्याव टेष्टको बेलाबाहेक उनीहरुसँग दूरी नै हुन्थ्यो ।
कतारमा संक्रमण देखिएको १७ दिनपछि म नेपाल आएँ । म आउँदा कतार एयरमा अधिकांश सीटमा मान्छे छरिएका थिए । यात्रुहरु २० प्रतिशत जति होलान् । ट्रान्जिटबाट आउने टुरिस्टले क्यान्सिल गरेर पनि मान्छे पातलो भएका होलान् । तैपनि, मलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको सबैभन्दा बढी डर प्लेनभित्र भयो । त्यति डर त मलाई बिरामी जाँच्दा पनि लागेको थिएन । वाथरुमको चुकुल खोल्न, लगाउन, फ्लस गर्न, पछि ढोका बन्द गर्न सर्ने डर हुन्थ्यो । कति ठाउँबाट आएका प्यासेन्जर हुन्छन्, के के भएको छ भन्नै नसकिने । प्लेनभित्र स्पेस पनि साँघुरो हुने । कसैले हाछ्युँ वा खोक्यो भने के गर्ने ? तैपनि घरीघरी प्लेनमै दिइएको ह्याण्ड स्यानीटाइजर टिस्युले हात पुछ्थें । ४ घण्टाको त्यो उडान मलाई एकदम डर भयो ।
मार्च १७ (चैत्र ४ गते) राति १ बजे नेपाल उत्रिएपछि बल्ल ढुक्क भएँ । बाहिर खुला ठाउँ देख्दा नि सुरक्षित महसुस भयो । एयरपोर्टमा ज्वरो नाप्यो । सामान्य रहेछ । एयरपोर्टमा यस्तो व्यवस्था भएको पाउँदा सुखी लाग्यो । अनि, एयरपोर्टबाट घर आएँ र घरमा छुट्टै बसेको छु । घर आएपछि थाह पाएँ, म आएको प्लेनपछि कतार एयरवेजको अर्को प्लेनमा फ्रान्सबाट आएकी एक जना विद्यार्थीलाई कोरोना संक्रमण भएको रहेछ । अब, प्लेनमा अरु कतिलाई समस्या भयो होला भन्ने लाग्यो ।
मैले घरमा परिवारसँग सतर्क भएर डिस्ट्यान्स मेन्टेन गरेको छु । किनकि रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बेस हुन्छ । बिरामी नभए पनि सबैको रक्षाको लागि परदेशबाट आएपछि सेल्फ क्‍वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । सेल्फ क्‍वारेन्टाइनमा होस् वा लकडाउनको बेला घर, कोठामा बस्दा होस् ‘बोर’लाग्न सक्छ । तर मलाई बोर भएको छैन । आफैंले आफूलाई ब्यस्त बनाउन सकियो भने बोर हुँदैन । यतिबेला कतिखेर मैले ल्यापटप, मोबाइल चलाउँछु । टीभी, अनलाइन हेर्छु । किताब पढ्छु । कुराकानी गर्छु । छततिर जान्छु । कतिखेर सुत्छु पनि । आफैंलाई विभिन्न काममा व्यस्त बनाएको छु । समय र कामको व्यवस्थापन गर्न नसके बोर हुन्छ । ब्यस्त हुँदा बोर भएको छैन । यतिबेला हामीले सिक्नुपर्ने के हो भने आफूलाई कसरी व्यस्त बनाउने ।
घर आएपछि एक पटक बाहिर निस्कें, त्यो पनि औषधि किन्न । बाटो पनि छली-छली एक्लो भएर हिँडे । कसैसँग छोइन्छ कि भनेर दूरी राखेर हिँड्थे । औषधि पनि अलि टाढैबाट लिएँ र घर फर्किएँ । अस्पतालमा जस्तो त गर्न नसकिएला तर आफूले भ्याएसम्म सतर्क हुनैपर्छ । मुख्यकुरा एक अर्को मान्छेबीच दूरी कायम गर्नेपर्छ, चाँहे हिँड्दा होस् वा कुरा गर्दा वा सामान किन्दा । जुनसुकै भाइरस हुन्, तीनबाट सतर्क हुने उपाय भनेको व्यक्ति ब्यक्तिबीच दूरी कायम गर्नु नै हो ।
हामी के ठानेका छौं भने माक्स लगाएपछि त्यसले रोक्छ । होइन, त्यो भन्दा धेरै खतरा हातबाट छ । मास्क जो मान्छेले खोक्छ, हाछ्यु गर्छ उनलाई माक्स आवश्यक हुन्छ । बिरामीको नजिक जानेहरुलाई माक्स चाहिन्छ । मास्कले नाक, मुखमात्र छोप्छ, हात त जता पनि जान्छ नि ! हाछ्यु गर्दा र खोक्दा कुहिना वा टिस्युले छेक्नुपर्छ । बारम्बार हात धुने, हात नाक, मुख, आँखामा नलैजाने र बाहिरबाट ल्याउँदा पनि सतर्कता अपनाउनै पर्छ । सामान किन्दा पनि दूरी बनाएरै किन्नुपर्छ । अब खाना, खाजा, चिया खाने ठाउँमा पनि चेक गर्नुपर्छ–हात धुने ठाउँ छ कि छैन भनेर । बाटो–बाटोमा पनि हात धुने स्टेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हातको सरसफाई गर्न सक्यौं भने हामी यस्ता संक्रमणबाट जोगिन मद्दत पुग्छ ।
अब, हामीमा एउटा के भ्रम छ भने गर्मीको बेला कोरोनो भाइरसको संक्रमण हुँदैन । त्यो भन्ने आधार पनि भेटिएको छैन । जस्तै, कतार र सिंगापुरमा यतिबेला गर्मी छ, तै पनि त्यहाँ संक्रमित भेटिएका छन् । यो संक्रमण जाडोमा पनि देखिएको छ र गर्मीमा पनि देखिएको छ । त्यसैले, यसबाट जोगिने उत्तम उपाय भनेको सतर्क भएर घरमै बस्नु, सरसफाईमा ध्यान दिनु र एकअर्को बीच दूरी कायम गर्नु हो । विशेषगरी, विदेशबाट आएका सबैलाई म हाउस क्‍वारेन्टाइन वा सेल्फ क्‍वारेन्टाइनमै बस्न सल्लाह दिन्छु ।
साधारण रुघाखोकी र ज्वरो आउँदैमा डराउन पर्दैन । ज्वरो धेरै आयो र स्वास फेर्न गाह्रो भयो भने चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि गरेका प्रयासहरु देख्दा मलाई सुखी लागेको छ । यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ । यो भाइरस रोकथामको उपाय र खोप पत्ता नलागुन्जेल हामीले हेलचेक्रयाइँ गर्नुहुँदैन । सबै मिलेर नै यो रोगकाविरुद्ध लड्नुपर्छ ।
प्रकाशित : चैत्र १४, २०७६ १४:०९
चैत्र ५, २०७६ दिनेश रेग्मी
काठमाडौँ — उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधिलगायतको अभाव र कालोबजारीको सामना गर्नुपरेका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले अभाव नभएको र हुन नदिने दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको ‘उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’ को मंगलबारको बैठकमा उनले कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न पछि नहट्ने बताए । राजधानीलगायत ७७ जिल्लामै बजार अनुगमन भएको उनको भनाइ छ ।
समितिलाई आफ्ना सेवा तथा वस्तुको अवस्थाबारे जानकारी दिन औषधि व्यवस्था विभाग, वाणिज्य विभाग, साल्ट्र ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र दुग्ध विकास संस्थानका अधिकारी उपस्थित थिए ।
समितिका सांसदले कोरोना संक्रमणको त्राससँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भएको, कालोबजारी, महँगी बढेको, बजार अनुगमन नभएको, आपत्कालीन अवस्थाका लागि सरकारले तयारी नगरेको आरोप लगाएका थिए । समितिले उद्योगमन्त्री, सचिव तथा विभिन्न विभाग तथा संस्थानका प्रमुखसँग जानकारी माग्दै उपभोग्य वस्तुको सहज व्यवस्था गर्न र बजार अनुमनलाई तीव्र पार्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्री भट्टले दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज उपलब्ध गराउन सस्तो तथा मोबाइल पसल खोल्ने तयारी थालिएको बताए ।
दैनिक एक लाख मास्क उत्पादन
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव वैकुण्ठ अर्यालले मास्क दैनिक एक लाख उत्पादन हुने बताएका छन् । ‘भोलि (बुधबार) देखि दैनिक एक लाख मास्क उत्पादन हुन्छ, अब त्यो क्षमता विकास भएको छ,’ अर्यालले भने, ‘खाद्यान्न र ग्यासको अभाव छैन, इन्डक्सन चुल्होलाई वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले १० महिनालाई आयोडिनयुक्त नुनको मौज्दात रहेको भन्दै बजारमा नुन अभाव नभएको दाबी गरिन् । चिनीको माग बढेको र क्रसरको बेला भएकाले मिलसँग यथेष्ट चिनी रहेको सुनाइन् । ‘देशभरका जनतालाई १० महिनाभन्दा बढी समयसम्म नुनको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने कर्पोरेसनसँग क्षमता छ,’ उनले भनिन्, ‘हाल ९ हजार ७ सय मेट्रिक टन स्टक मौज्दात छ ।’
सेनिटाइजर बनाउन ३ कम्पनीको प्रस्ताव
औषधि व्यवस्था विभागका प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालले ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन गर्न तीन नेपाली कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेको बताए । औषधि तीन/चार महिनालाई स्टक रहेको भन्दै उनले मन्त्रालयले खरिदको योजना पनि बनाएको जानकारी गराए । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले मंगलबारै दुई लाख सिलिन्डर ग्यास भित्रिँदै गरेको जानकारी दिँदै यसको अभाव नहुने बताए । ‘माग बढी भएकाले पहिला आउनेले पहिलो सेवा पाएका छन् तर ग्यासको अभाव छैन,’ पौडेलले भने, ‘बजारमा १ करोड १२ लाख ग्यास सिलिन्डर छन्, मासिक साढे २८ लाख खपत हुन्छ तर अहिले बजारमा भएका सिलिन्डर पनि भर्ने क्रम बढेको छ ।’
खाद्य व्यवस्था विभागका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले खाद्यान्न मौज्दात पर्याप्त भएकाले हिमाल, पहाड, तराई कहीँ पनि समस्या नहुने उल्लेख गरे । ‘खाद्यान्न ६ महिनालाई पुग्छ, सकिनासाथ चक्रीय प्रणालीअनुसार खरिद गरिहाल्छौं,’ उनले भने ।
दूध उत्पादन बढे पनि त्यहीअनुसार बिक्री नभएको दुग्ध विकास संस्थानका वरिष्ठ अधिकृत विष्णुप्रसाद काफ्लेले सुनाए । उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले नागरिक तथा सांसदबाट बजारमा कालोबजारी बढे पनि अनुगमन चुस्त नभएको जानकारी आएकाले तत्काल सहज व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।
प्रकाशित : चैत्र ५, २०७६ ०८:०८